Nke mbụ bụ na ọ bụ naanị Jehova Chineke ka anyị ga na-ekpegara ekpere, ọ bụghị Jizọs, ndị sent ma ọ bụkwanụ ihe a kpụrụ akpụ. (Ọpụpụ 20:4, 5) Baịbụl kwuru hoo haa, sị: “N’ihe niile, jirinụ ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike na inye ekele mee ka Chineke mara ihe unu na-arịọ.” (Ndị Filipaị 4:6) Nke abụọ bụ na anyị ga na-ekpe ekpere n’aha Ọkpara Chineke, bụ́ Jizọs Kraịst. Jizọs kwuru, sị: “Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna m ma ọ́ bụghị site na mụ.” (Jọn 14:6) Nke atọ bụ na ihe anyị na-ekpe n’ekpere kwesịrị ịbụ ihe bụ́ uche Chineke. Baịbụl kwuru, sị: “Ihe ọ bụla nke anyị rịọrọ ya dị ka uche ya si dị, ọ na-anụ olu anyị.” *—1 Jọn 5:14. Enyi na enyi na-agwa ibe ha otú obi dị ha ugboro ugboro
mailto:?body=Gị na Chineke Ùnu Na-ekwurịta Okwu?%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D2014884%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Gị na Chineke Ùnu Na-ekwurịta Okwu?